"Arsenal Waxay U Baahan Tahay Inay Caydhiso Kala-badh Ciyaartoygeeda" | Laacibnet.net
“Arsenal Waxay U Baahan Tahay Inay Caydhiso Kala-badh Ciyaartoygeeda”
Arsenal waxay u baahan tahay isbeddel weyn oo lagu sameeyo, isla markaana laga diro kala badh ciyaartoyga kooxda koowaad ee hadda, sida uu rumaysan yahay laacib hore oo kasoo baxay kulliyadda naadigan ka dhisan woqooyiga London.
Tababare Mikel Arteta ayey tahay inuu ka takhaluso oo uu Emirates Stadium ka caydhiyo kala-badh ciyaartoyga uu hadda ku haysto, si uu hore ugu socon karo oo uu u dhiso naadi sannado kaddib kusoo laaban kara heerkiisii hore.
Sida uu sheegay laacibkii hore ee David Bentley ee kulliyadda Arsenal kasoo baxay, labadii ciyaarood ee Manchester City iyo Brighton waxay dhulka sii geliyeen kooxda iyagoo burburiyey rajo kasta oo ay sare ugu soo socon karayeen, laakiin waxay iftiin yar oo aan badnayn ka heleen Sheffield United oo ay Axaddii kusoo garaaceen wareegga siddeed-dhamaadka FA Cup, taas oo ay ugu dudbeen semi-finalka oo ay Man City wada ciyaari doonaan.
“Anigu ma garanayo waxa uu yahay fikirka guddida sare ee maamulka iyo heerka uu gaadhsiisan yahayba, sababtoo ah, Arsenal waxay u baahan tahay in laga diro kala badh ciyaartoyga hadda, lana helo aasaas wanaagsan. Way adag tahay, balse waa la samayn karaa. Dhibaatada ugu weyn waxay tahay in aynaan garanayn in guddida maamulku ay ku heesayaan isla heestii hore.” Ayuu yidhi David Bentley.
Laacibkan hore waxa uu farta ku fiiqay David Luiz oo uu tilmaamay inuu yahay astaanta fashilka Arsenal ee waqtigan, waxaanu yidhi: “Ma garanayo haddii sababtu tahay diyaar-garow la’aan ciyaartoyda imanaysa ah, laakiin shaqaalaynta afarta difaac ee dambe waa mushkilad. Sidaas ayey mar walba ahaan jirtay. David Luiz ayaa mashaqo ah.
“Farsamo ahaan waa ciyaartoy wanaagsan, laakiin haddii aad keento ciyaartoyda da’ yarta oo aad abuurayso maskax guuleed, miyuu isagu yahay noocii caawin lahaa? Aniga waxa layaab igu noqotay heshiiska cusub ee la siiyey.”
Bentley waxa uu Arsenal weydiiyey sababta ay ula soo saxeexan waayeen Gary Cahil oo Chelsea si bilaash ah kaga baxay halka ay David Luiz lasoo saxeexanayeen, waxaanu isbarbar-dhig ku sameeyey tayadooda iyo awooddooda difaac, isaga oo ruug caddaaga Ingiriiska ah sarraysiiyey.
Si kastaba, Arsenal waxay hadda fadhidaa kaalinta sagaalaad ee kala-sarraynta horyaalka Premier League oo ay toddoba ciyaarood ka hadhsan yihiin, waxaanay 11 dhibcood ka dambeeyaan Chelsea oo afraad fadhida.